कतिमा हुँदैछ सुनको कारोबार ? – Suchana Hub
कतिमा हुँदैछ सुनको कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनको मुल्य बढेको छ । हिजो प्रतितोला ९४ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज एकैदिन प्रति तोलामा १ सय रुपैयाँले बढेर ९४ हजार ९ सयमा कारोबार भैरहेको छ ।
त्यस्तै आज तेजाबी सुन प्रति तोला ९४ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । तेजाबी सुन हिजो प्रति तोला ९४ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै गरि आज चाँदीको भाउ पनि ५ रुपैयाँले बढेको छ । हिंजो प्रति तोला १ हजार २ सय १५ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको चांदीको मुल्य आज प्रति तोला १ हजार २ सय २० रुपैयाँ रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
Next तिहारमा ३ दिन बैंक नखुल्ने